Usola 'omakhelwane' ofelwe yizingane | News24
Usola 'omakhelwane' ofelwe yizingane
Johannesburg - UNthabiseng Magagula, ongumama wenye yezingane ezinhlanu ezishone ngesikhathi kusha umjondolo e-Orange Farm, ngeSonto, uthi ufusa sengathi ngabe uyena oshe nomjondolo washona, hhayi izingane.
UMagagula, ongumama wengane yomfana eneminyaka emine ubudala, encane kunazo zonke ezinye ezibulawe ukuhilwa yintuthu, uthe ubenethemba lokuthi ngelinye ilanga lezi zingane zizoqeda isikole, ziphumelele empilweni, kubika iThe Citizen.
Izingane ezishonile ziphakathi kweminyaka emine kuya kwengu-17 ubudala.
Funda nalolu daba: Amaphoyisa athungatha umzanyana obaleke nosana
“Ubaba wami kanye nami besisendlini enkulu ngezithuba zabo-11pm ngesikhathi sizwa izingane ezimbili zingqongqoza kakhulu emnyango, zizobika ukuthi kuyasha.”
“Siphumele ngaphandle sayozama ukucisha umlilo, kodwa ubumkhulu kakhulu…kube sekuza iveni yamaphoyisa ebekade idlula ngendlela, kodwa nawo akukho abezokwenza. Ngesikhathi kufika abezicishamlilo bekungekho ebebesangakwenza ukusindisa impilo yabo,” kusho uMagagula.
Uthe akazi ukuthi umlilo ngabe udalwe yini kodwa basola isenzo sobuthakathi ngoba umjondolo ubengenazo izintambo zikagesi, amakhandlela noma isitofu sikapharafini.